သဘာဝအားအင်: အသက်ရူမ၀ဖြစ်ပြီး မောခြင်း
by ပိုပိုဇော်(သဘာဝအားအင်) on Sunday, March 10, 2013 at 8:47am
လူ့ခန္ဓာကိုယ် အသက်ရှူစနစ်ရဲ့ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာ တခုခုရှိခဲ့ရင် မောခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။ အသက်ရှူစနစ်ဆိုရာမှာ အသက်ရှူမှုကို ထိန်းချုပ်တဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ကနေ အဆုတ်ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ လေအိပ်ကလေးတွေအထိ ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင် အာရုံကြောတွေ၊ အသက်ရှူမှုဆိုင်ရာ ကြွက်သားတွေ၊ အဆုတ်၊ လေပြွန်၊ နှလုံး၊ သွေးနီဥအရေအတွက် စတာတွေမှာ ပြဿနာဖြစ်ရင် မောလာတတ်ပါတယ်။
မောခြင်းဟာ အောက်ပါအကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် ဖြစ်စေပါတယ်။
· အဆုတ်ရောဂါ – အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောဂါများ၊ (aspiration) လေပြွန်ပိတ်ခြင်း၊ အဆုတ်တွင်းရောဂါများ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ (pneumonia)၊ အဆုတ်ရေ၀င်ခြင်း (pleural effusion)၊ ကင်ဆာရောဂါ၊ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ(asthma)၊ အဆုတ်သွေးကြောပိတ်ခြင်း (pulmonary embolus)၊ နာတာရှည် အဆုတ်ရောဂါ (COPD)၊ ရုတ်တရက်ဖြစ်သော အဆုတ် ရောဂါစု (ARDS)၊ အဆုတ်ကိုထောက်ပံ့သော အာရုံကြောရောဂါ စတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
· နှလုံးရောဂါ – နှလုံးဘယ်ဘက် အခန်းအားနည်းရောဂါ (LVF) ကိုဖြစ်စေသော နှလုံးရောဂါများ -ဥပမာ- နှလုံးသွေးကြောရောဂါ (coronary artery disease)၊ နှလုံးအဆို့ရှင်ရောဂါများ (aortic stenosis/ regurgitation, mitral stenosis/ regurgitation, pulmonary stenosis)၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်ရောဂါ (ventricular tachycardia, supraventricular tachycardia)
· ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုဆိုင်ရောဂါများ(metabolic disease)ဖြစ်တဲ့ သိုင်းရွိုက်ဂလင်း အဆိပ်ဖြစ်ခြင်း (thyrotoxicosis)၊ သွေးတွင်း acid ဓာတ်များရောဂါ (ketoacidosis) ၊ သွေးဆိပ်တက်ခြင်း(sepsis)၊ ပမာဏလွန်(drug overdose) သောဆေးများကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
· သွေးအားနဲခြင်း (Anemia)ကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်ပြီး
· စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာများဖြစ်တဲ့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြများခြင်း (anxiety) သို့မဟုတ် (hyperventilation).[psychogenic dyspnoea] တွေကြောင့်မောတဲ့ ဝေဒနာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
2.1 မောပန်းခြင်း၏ ရောဂါရာဇ၀င်ပေါ်မူတည်ခြင်း
သင်ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာအထိ မောနေသလဲ (severity) ဆိုသော အချက်မှာ ပထမဆုံး အရေးပေးစဉ်းစားရမည့် အချက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ-မြေပြင်မှာလျှောက်ရင်မောလား၊ ကုန်းပေါ်တက်မှမောလား၊ ဘယ်နှစ်လှမ်းလောက်ဆို စမောပြီလဲ၊ လှေကားဘယ်နှစ်ထစ်ဆိုမောလဲ၊ သင်ကိုယ်တိုင် အ၀တ်အစားများလဲလှယ်တာကိုပင် မောနေသလား၊ ဘာမှမလုပ်ဘဲမောနေသလား။
လှဲအိပ် လိုက်လျှင်မောခြင်း(orthopnoea) သည် နှလုံးမောခြင်း (heart failure) ၏ လက္ခဏာ တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းများပိတ်ခြင်း၊ အသက်ရှူကြွက်သားကြီး အလုပ်မလုပ်ခြင်း (ရှားပါးသည်) (bilateral diaphragmatic paralysis) တို့ကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အိပ်ပျော်နေရာမှ ထ၍မောလာခြင်း (Paroxysmal nocturnal dyspnoea) သည် ယေဘုယျ အားဖြင့် နှလုံးရောဂါ ၏ လက္ခဏာဖြစ်သည်။
သင်သည် မနေ့ညက မလှဲနိုင်၍ထိုင်ခုံပေါ်တွင် အိပ်ရသည်ဆိုလျှင် ပြင်းထန်သောမောပန်းခြင်း (severe orthopnoea)ကို ခံစားနေရခြင်းဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုစဖြစ်သလဲ ဆိုသည့် အချက်သည်လည်း ရောဂါဇစ်မြစ်အတွက်အရေးကြီးသည်။
ရုတ်တရက်ပြင်းထန်ပြီး ဖြစ်သည်(acute) ဆိုလျှင် ပြင်ပမှပစ္စည်း တစ်ခုခု အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းတွင် ဆို့နေခြင်း၊ အဆုပ်တွင်လေများပိတ်မိခြင်း (pneumothorax)၊ အဆုပ်ရေမွန်းခြင်း (pulmonary edema)၊ အဆုပ်သွေးကြောပိတ်ခြင်း(pulmonary embolism)၊ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ (asthma) တို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရုတ်တရက်မဟုတ်သော်လည်း အချိန်တိုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့်(subacute) ဆိုလျှင် အဆုတ်အတွင်း လေအိပ်ငယ်များရောင်ခြင်း (pleural effusion)၊ အဆုတ်ရောင်ခြင်း (pneumonia)၊ လေပြွန်ကင်ဆာရောဂါ (carcinoma of bronchus or trachea) ကြောင့် ဖြစ်လေ့ ရှိပါသည်။
အမြဲတစေ နာတာရှည်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ(COPD) အကြောင်းရင်းမသိရသော လေပြွန်အိပ်ငယ်ရောင်ရမ်းရောဂါ (cryptogenic fibrosing alveolitis) ၊ လုပ်ငန်းခွင်ကြောင့်ဖြစ်သော အဆုတ်ရောဂါ (occupational fibrotic lung disease) ၊ အဆုတ်ကြောင့်မဟုတ်သော ရောဂါများဖြစ်သည့် နှလုံးဘယ်ဘက်ခန်းအားနည်းရောဂါ (LVF) ၊ သွေးအားနည်းရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်ဂလင်းတက်ကြွလွန်ရောဂါ (hyperthyroidism) တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့တွဲပြီး မောသလား? သင်သည် အမြဲတစေချောင်းဆိုးနေပါက ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ (asthma) ၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောဂါ (COPD)၊ ဆေးဝါးများ (ဥပမာ-သွေးတိုးကျဆေးတမျိုးဖြစ်သည့် (ACEI) လုပ်ငန်းခွင်ရှိ မီးခိုး(သို့)အမှုန် အမွှားများ ၊ နှလုံးမောခြင်း(cardiac failure) နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ တို့ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သင်သည် သလိပ်ထွက်ပါက သလိပ်အရောင်အဆင့်သည် ဆရာဝန်အတွက် အသုံးဝင်သော အချက်တစ်ချက် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ချောင်းဆိုးသွေးပါလျှင် သွေးချည်းပဲပါနေသလား၊ သွေးစလေးပဲပါသလား ဟုဆရာသ၀န်က မေးပါလိမ့်မည်။ သွေးအန်ခြင်း၊ နှာခေါင်း အာခေါင်များမှ သွေးထွက်ခြင်းများနှင့် ခွဲခြားရန်လိုပါသည်။
အသက်ရှုသံ တခွီးခွီးဖြင့် မောနေသလား၊ လေချွန်သံများဖြစ်ကာ မောနေသလား၊ ပန်းနာရင်ကြပ် ရောဂါ၊ လေပြွန်ကို ပိတ်စေသောရောဂါများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သင်၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း သင့်အားဆရာဝန်က မေးမြန်းပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ သင့်အလုပ်တွင် ဖုန်မှုန့်အညစ်အကြေးများရှိသလား၊ လေ၀င်လေထွက် ကောင်းသလား ဟုမေးပါလိမ့်မည်။
ဤကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားသော မေးခွန်းများသည် သင်၏ ဆရာဝန်မေးနိုင်လောက်သည့် မေးခွန်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမေးခွန်းအားလုံးမေးရမည်ဟု မဆိုလိုပေ။ သင်၏ ဆရာဝန်သည် သင့်အား စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ဖြစ်နိုင်သည့် အချက်များကို မေးမြန်းမည်ဖြစ်၍ သင်သည်ဆရာဝန်အား မေးခွန်းများသေချာစွာမမေးဟု မထင်စေလိုပါ။ ဥပမာ- ပန်းနာရင်ကြပ်ဝေဒနာသည် အား မေးခွန်းများ နောက်မှမေး၍ အရင်ကုသရန် လိုကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။
CP, Basic Metabolic Panel, D-dimer, Bap, Chest X’ray, CT scan, ECG , ABG အစရှိသဖြင့် စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
Credit - Dr Soe Paing
Posted by ပိုပိုဇော် at 23:50